Carruurta ka soo jeeda Asia waxay kuwa Faransiiska uga horeeyaan dhinaca waxbarashada… – Hagaag.com
Carruurta ka soo jeeda Asia waxay kuwa Faransiiska uga horeeyaan dhinaca waxbarashada…
Posted on 8 Janaayo 2020 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Carruurta asal ahaan ka soo jeeda Aasiya ee ku nool Faransiiska, gaar ahaan gabdhaha, ayaa ah kuwa si aad ah ugu guuleysta marka loo barbar dhigo Faransiiska iyo kuwa kale, waxayna leeyihiin heerarka ugu wanaagsan ee heerka dugsiyada hoose iyo dhexe iyo hagitaan badan oo ku saabsan xulashada takhasuska, waxayna keenaan darajooyinka ugu sareeya heerarka baccalaureate, sida lagu sheegay warbixin lagu daabacay joornaalka Faransiiska ee Le Figaro.
Natiijooyinkaasi ayaa laga helay daraasad uu sameeyay caalim dhinaca bulshada ah Yael Brainbaum oo ka tirsan Machadka Farshaxanka iyo xaruufaha oo ay ka qeyb qaateen soddon kun oo arday intii u dhaxeysay 2007 iyo 2016, waxaana la daabacay December 2019 oo lagu daabacay joornaalka Waxbarashada iyo Tababbarka ee Wasaaradda Waxbarashada Qaranka, oo daraasad ku sameysa “dariiqyada waxbarasho ee carruurta soogalootiga ah ilaa shahaadada baccalaureate-ka.”
Daraasadda ayaa isbarbar dhig ku sameysay natiijooyinka carruurta waalidkood ku dhashay Faransiiska iyo kuwa waalidkood ku dhasheen dalka dibadiisa, waxaana lagu ogaadey in 76.14% ardaydaas soo xaadiray fasalka lixaad ee 2007 ay qaateen shahaadada baccalaureate sanadkii 2016, celcelis ahaan iyadoo loo eegayo kala duwanaanshaha asalka bulshada, socdaalka, iyo jinsiga ardayda.
Daraasadu waxay muujisay in jiilalka labaad ee soogalootiga ay ku guuleystaan shahaadada ​​baccalaureate-ka in ka yar kuwa asalkooda Faransiiska yahay, marka laga reebo ilmaha awoowaha u ah Boortaqiiska oo aad ugu dhawaa saamiga Faransiiska iyo kuwa walidkooda labaad Aasiyaanka ah.
Waxay ku soo gabagabowday kuwa asal ahaan ka soo jeeda Aasiya ee gabdhaha iyo wiilasha labaduba, waxay leeyihiin heerar sare oo ay ku guuleystaan imtixaanada loogu talagalay baccalaureate qiyaastii 92% iyo 88%, waxayna ka sarreeyaan natiijooyinka kuwa asal ahaan ka soo jeeda Faransiiska.
Iyadoo la tixgalinayo jinsiga ardayga iyo asalkiisa ka hor hijrada waxay bixineysaa sawir aad u xiiso badan, halka gabdhaha ay ka sareeyaan wiilasha waxkasta oo asalkoodu yahay, si gaar ah farqiga ayaa muhim u ah gabdhaha ka soo jeeda Afrika iyo kuwa ka soo jeeda Maghreb waxay natiijooyinkooda u dhow yihiin gabdhaha Faransiiska, si ka duwan wiilasha oo natiijooyinkooda ka hooseeya, sida lagu sheegay wargeysku.
Waxaa jira laba nooc oo ah shahaadada loo yaqaan ‘baccalaureate’: haddii gabdhaha ka socda kooxo dhowr ah ay la mid noqdaan kuwa dhiggooda Faransiiska ah, markaa natiijooyinkooda baccalaureate-ka guud waa ka yar yihiin luqada Faransiiska, gabdhaha waalidkooda ka soo haajiray Bortaqiiska ama muhaajiriinta Maghreb waxay ka yar yihiin 15 dhibcood, halka kuwa Afrika wadamada Sahara-ha ka hooseeya ama Turkiga ka yar yihiin 22 dhibcood.